के मा’सु खाँदा पा’प लाग्छ ? यस्तो छ आध्या’त्मिक रह’स्य : – Sadhaiko Khabar
के मा’सु खाँदा पा’प लाग्छ ? यस्तो छ आध्या’त्मिक रह’स्य :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ११, २०७८ समय: १६:०५:१४
महेन्द्रकुमार शाक्य /
साधारणतया बु’द्धको अहिं’साको शिक्षालाई मां’सहारसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । मां’सहारलाई ब’न्द गर्ने हो भने प्रा’णीहिंसा स्वत: बन्द हुन्छ । कमसेकम बौ’द्धमार्गीहरुले मात्र मां’सहार नगर्ने हो भने पनि धेरै ह’दसम्म प्रा’णी हिं’सा रोक्न सकिन्छ भन्नेहरु मैले धेरै भेटेको छु ।
सिद्धान्तत: मा’सु खान पूरै ब’न्द गर्ने हो भने प्रा’णीहिंसा धेरै हदसम्म कम हुन्छ भन्ने त’र्क नमिल्दो पनि देखिँदैन । ठूलठूला बौ’द्ध विद्वान्हरु पनि यस विषयमा वि’वादमा ता’निएको देखिन्छ ।
बौ’द्ध ऋषि महाप्रज्ञाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा बर्मामा वि’वादमा तानिएको बताउनुभएको छ । यस ग’हन विषयमा मैले आफ्नो विचार राखेर विवा’दमा तानिन चाहन्नँ । तर पनि मा’सु खाने नखाने विषयमा आफूलाई लागेको कुरा मेरो आफ्नै अनुभव यहाँ बाँड्न चाहन्छु ।
‘सरलाई लोकल कुखुरा चल्छ ?’ गोरखा जिल्लाको एउटा दुर्ग’म गाउँमा मलाई सोधिएको प्रश्न हो यो । २०७२ सालको भूकम्पको करिब एक वर्षपछिको कुरा हो । भूकम्प प्रभावित गोरखा जिल्लाका गाउँहरुमा हाम्रो कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा भग्ना’वशेषहरु पन्छा’उने, भत्के’का बा’टो, कुलोहरु मर्मत गर्ने जस्ता कामहरु हुँदै थियो । तिनै कामहरु नि’रीक्षण गर्ने सिलसिलामा म गोरखा जिल्लाको रंचोक भन्ने दु’र्गम गाउँमा गएको थिएँ ।
दरौंदीपारि बारपाककै वारिपारि पर्ने त्यस गाउँ पुग्न गाडीमा लगभग २ घण्टा लाग्यो । बाटो निकै अ’प्ठेरो भएकाले अपराह्न त्यहाँ पुग्दा शरीर पूरै था’केको थियो । त्यस्तो था’केका बेला लोकल कुखुरा नचल्ने कुरै थिएन । मैले लोकल कुखुरा चल्छ भनेको भए एउटा कुखुराको ज्या’न जा’न्थ्यो र चल्दैन भनेको भए झू’ट बोलेको हुन्थ्यो ।
त्यसैले मैले च’ल्छ, च’ल्दैन केही नभनी ‘कुखुरा का’टिसकेको हो र’ भनेर सोधें । मलाई नै सोधेर कुखुरा का’ट्ने उनीहरुको मनसाय बुझेर मैले ‘कुखुरा का’ट्न पर्दैन, मलाई, गुन्द्रुक, सिन्की, बासको तामा असाध्य मन पर्छ, त्यही पकाए हुन्छ’ भनें ।
बेलुकी खाना खान बोलाए । मलाई आ’श्चर्य लाग्यो । खानासँगै एउटा प्लेटमा चार टु’क्रा कुखुराकै मा’सु पनि थियो । बिहान आफूहरुले खाएर बाँकी रहेको ब्रो’इलरको मा’सु । मलाई त्यो मा’सु खान कुनै आ’पत्ति भएन र खाएँ ।
बु’द्धको शिक्षामा सबै मा’सु एउटै हुँदैन, मा’सु दो’षसहित र दो’षरहित हुन्छ । मैले लोकल कुखुरा चल्छ भनेको भए कुखुरा का’टिन्थ्यो । मेरै कारणले, मेरै लागि का’टिने हुँदा त्यो मा’सु मेरा लागि दो’षसहित मा’सु हुन्थ्यो र त्यस कुखुराको ह’त्याको जिम्मे’वारीबाट मैले प’न्छिन मिल्दैनथ्यो ।
तर ब्रो’इलर कुखु’राको मा’सु मेरा लागि दो’षरहित मा’सु थियो । किनभने त्यसको ह’त्यामा मेरो कुनै सं’लग्नता थिएन । त्यो कुखुरा मेरा लागि भनेर का’टिएको थिएन । त्यसैले त्यस्तो मा’सु खान कुनै स’मस्या हुँदैन र पा’प पनि धेरै लाग्दैन ।
बु’द्धमार्गीहरु प’ञ्चशील पालना गर्नुलाई सुखी गृहस्थी जीवनको अनिवार्य आवश्यकता ठान्छन् । प’ञ्चशील पालना गर्दा प्रा’णीहिंसा नगर्ने, चो’री नगर्ने, मै’थुन सम्बन्धी व्यभि’चार नगर्ने, झू’ट नबोल्ने र मा’दक पादर्थ नपि’उने जस्ता पाँचवटा नियमहरुको पालना गर्नुपर्दछ ।
प’ञ्चशीलका यी पाँच शीलहरुमा प्राणी हिं’सा नगर्ने शील पहिलो नम्बरमा आउँछ । हिं’साको पूर्ण त्या’ग नगरी कुनै पनि आ’ध्यात्मिक विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले अहिं’सा धेरै महत्वपूर्ण छ । तथापि त्यसो भनिरहँदा प’ञ्चशीलका बाँकी चार वटा शीलहरुको चाहिं महत्व छैन भन्ने होइन ।
प’ञ्चशीलका बाँकी चार शीलहरुको पालना गर्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रा’णी हिं’सा नगरे पनि चो’री गर्नु राम्रो होइन, त्यसरी नै व्य’भिचार, झु’ट र मा’दक पदा’र्थको से’वन गरिरहेसम्म शीलपालन गरेको ठ’हर्दैन ।
जीवनलाई सुखमय बनाउन साथै आ’ध्यात्मिक विकासका लागि यी पाँचवटै शीलहरु पालना गर्नु त्यति नै आवश्यक हुन्छ । बुद्धको शिक्षामा शील नि’र्वाणमार्गको पहिलो खु’ट्किलो हो र हिं’सा नगर्नु शीलको मात्र एउटा अं’ग । सबै होइन । मा’सु नखाँदैमा शीलवान् भइन्छ भन्ने पनि होइन र मा’सु नखाने सबैले हिं’सा गर्दैनन् भन्ने पनि हुँदैन ।
भनिन्छ, देवदत्त शा’काहारी थिए । उनले भि’क्षुहरुले जीवनभर मा’छामासु खा’न नहुने नियम बनाउन बु’द्धसँग मा’ग गरेका थिए । तर बु’द्धले उनको मा’गलाई स्वीकार गर्नु भएन । मा’छामासु खान नहुने नियमको व’कालत गरेका उनले बु’द्धकै ह’त्या गर्ने थुप्रै प्रयास गरेका थिए । जर्मनका कु’ख्यात ता’नाशाह हि’टलर पनि मां’सहार गर्दैनथे तर उनले जति धेरै मानि’सहरुको बी’भत्स ह’त्या सायद अरु कसैले गरेनन् होला ।
बु’द्धको शिक्षाको एउटा मात्र ल’क्ष्य नि’र्वाण प्राप्ति अथवा दु:’खबाट पू’र्णमुक्ति हो । शील, समा’धि र प्रज्ञाको पूर्ण अभ्यास नगरी मात्र मा’सु नखाँ’दैमा कसैलाई पनि नि’र्वाण प्राप्त हुने हुँदैन । नि’र्वाण मनको स्वच्छ र पवित्र अवस्था हो । वर्षौंदेखि सफा नगरेको घरझैँ म’नलाई सफा र पवित्र बनाउन सजिलो हुँदैन । भग’वान् बु’द्धले मानव मन सफा गर्नका लागि शील, स’माधि र प्रज्ञाको मा’र्ग देखाउनु भएको हो ।
शील, स’माधि र प्रज्ञाको पूर्णताका लागि ठूलो प्रयत्न र सा’वधानी आवश्यक हुन्छ । यसका लागि एक हैन, अनेक जीवन लाग्न सक्छ । सगरमाथा चढ्ने विशाल ल’क्ष्य बोकेर हिँडेको पर्वतारोही पहिलो खुट्किलोमै अ’ड्किएझैं मा’सु खान हुन्छ हँदैन भन्ने विषयमै अल’मलिएर शील, स’माधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने गम्भीर विषयलाई ओ’झेलमा पार्नु कुनै पनि मानेमा राम्रो होइन ।
त्यसैले मासु खाए पनि प्राणी हिं’सामा आफूलाई सं’लग्न नगर्नु, सक्दो दान दिनु, शीलपालन गर्नु, स्वस्थ शरीर र मनका लागि ध्यानको नियमित अभ्यास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।‌ – Reporters nepal बा’ट सा’भार ।